Google नक्सा | मा कसरी निर्देशांकहरू प्रविष्ट र खोजी गर्ने ग्याजेट समाचार
गुगल नक्शा धेरै व्यक्तिको दैनिक जीवनमा एक आवश्यक अनुप्रयोग हो, जो यसको कामको लागि प्रयोग गर्दछन् र जब एक दिन-दिनको आधारमा यात्रा गर्दछ। यो पनि हाम्रो छुट्टिको लागि एक उत्तम अनुप्रयोग हो वा यदि हामी एक निश्चित ठाउँ खोज्न चाहन्छौं। जब यो अनुप्रयोग भित्र खोजी गर्न आउँदछ, वा यसको वेब संस्करणमा, हामीसँग बिभिन्न विकल्पहरू छन्।
हामी शहर वा एक विशेष स्थानको नाम प्रविष्ट गरेर खोजी गर्न सक्दछौं (एउटा संग्रहालय, पसल, रेष्टुरेन्ट वा मनपर्ने ठाउँ)। तर यदि हामी चाहन्छौं भने हामीसँग यसको सम्भावना पनि छ निर्देशांक प्रयोग गरी Google नक्सामा खोजी गर्नुहोस्। यद्यपि यो सम्भावना केहि हो जुन धेरै प्रयोगकर्ताका लागि शंका उत्पन्न गर्दछ। यो कसरी प्रयोग गर्न सकिन्छ?
यदि हामी चाहन्छौं भने हामी साइटको अक्षांश र देशान्तर निर्देशांक प्रविष्ट गरी खोजी गर्न सक्दछौं। यद्यपि यस अर्थमा, यो महत्त्वपूर्ण छ कि हामी तिनीहरूलाई अग्रिम जान्नुपर्दछ, अनुप्रयोगमा यस खोजीमा उनीहरूलाई प्रयोग गर्न सक्षम हुन। यस मामला मा एक महत्वपूर्ण पक्ष हामीले प्रयोग गर्ने ढाँचा हो। यसका लागि गुगल द्वारा धेरै सुझावहरू दिइएका छन्।
1 समन्वय ढाँचा
2 गुगल नक्शामा कसरी निर्देशांकहरू प्रविष्ट गर्ने
3 साइटको गुगल नक्शामा कसरी निर्देशांकहरू फेला पार्ने
जब कुनै विशेष साइटको निर्देशांकहरू राख्दछौं, हामी धेरै ढाँचाहरू प्रयोग गर्न सक्दछौं। गुगल नक्शाले पनि धेरै स्वीकार गर्दछतर यो सम्भव छ कि अवसरमा प्रयोगकर्ताहरूले गल्ती गरे, ताकि तिनीहरूले अनुप्रयोगको साथ खोजी गर्न चाहेको साइट फेला पार्न सकेनन्। भाग्यवस, एप्लिकेसनले स्पष्ट रूपमा हामीलाई प्रयोग गर्न सक्ने ढाँचाहरू देखाउँदछ, जुन निम्न छन्:
डिग्री, मिनेट र सेकेन्ड (DMS): 41°24'12.2"N 2°10'26.5"E
डिग्री र दशमलव मिनेट (DMM): 41 24.2028,210.4418
दशमलव डिग्री (DD): 41.40338, 2.17403
तसर्थ, यदि तपाईं यी कुनै पनि समन्वय ढाँचाहरूको गुगल नक्सामा प्रयोग गर्नुहुन्छ भने, तपाईले खोज्नु भएको साइट भेट्टाउन सक्नुहुन्छ। यी निर्देशांकहरू प्रयोग गर्दा समस्याहरूबाट बच्न, त्यहाँ केही सुझावहरू छन् जुन अनुप्रयोगमा लिनु महत्त्वपूर्ण छ:
"G" अक्षरको सट्टा डिग्री प्रतीक प्रयोग गर्नुहोस्।
अल्पविरामको सट्टा दशमलवको लागि अवधि प्रयोग गर्न सिफारिस गरिन्छ। उत्तम तरिका यसैले यस्तो छ: 41.40338, 2.17403.
पहिले अक्षांश निर्देशांक र त्यसपछि देशान्तर निर्देशांक लेख्नुहोस्
अक्षांश समन्वयको पहिलो नम्बर-० र between ० बीचको मान हो जाँच गर्नुहोस्
देशान्तर निर्देशांकको पहिलो नम्बर -१180० र १ between० बीचको आंकडा जाँच गर्नुहोस्
तल हामी तपाइँलाई बाटोमा देखाउँछौं जुन अनुप्रयोगमा उनीहरू परिचय भइरहेका छन् यस मामलामा इच्छित परिणाम प्राप्त गर्न।
गुगल नक्शामा कसरी निर्देशांकहरू प्रविष्ट गर्ने
हामीले गर्न सक्ने पहिलो कुरा Google नक्सा खोल्नु हो। हामी अनुप्रयोगको डेस्कटप संस्करण, साथै मोबाइल फोन र ट्याब्लेटको लागि यसको अनुप्रयोग दुबै प्रयोग गर्न सक्दछौं। हामीले प्रयोग गर्न लाग्ने प्रणाली सबै समयमा समान छ, त्यसैले यो तपाइँले कसरी प्रयोग गर्ने फरक पर्दैन। जब हामीले अनुप्रयोग वा वेब खोल्छौं, हामीले खोजी पट्टीमा जानुपर्दछ।
अनुप्रयोगमा खोजी पट्टीमा हामीले गर्नु पर्छ निर्देशांकहरू प्रविष्ट गर्नुहोस् जुन हामी फेला पार्न चाहन्छौं, हामीले अघिल्लो सेक्सनमा उल्लेख गरेका कुनै पनि ढाँचा प्रयोग गर्दै। एकचोटि यी निर्देशांकहरू प्रविष्ट गरिसकेपछि, हामीले भर्खर इन्टरमा हिट गर्नुपर्दछ वा म्याग्निफाइ glass ग्लास आइकनमा क्लिक गर्नुपर्नेछ, ताकि उक्त अनुप्रयोगमा माथि उल्लेखित खोजी गरिन्छ। यो निर्देशांक सम्बन्धित साइटमा स्क्रिनमा प्रदर्शन हुनेछ।
यो हुन सक्छ कि कहिलेकाँही Google नक्सा हुन्छ हामीलाई नक्शामा पोइन्ट देखाउनुहोस् जुन यी निर्देशा belong्गहरूसँग सम्बन्धित छ, तर ती साइटको सटीक नाम देखाउँदैन। जे होस् ठेगाना वा नाम प्रायः वर्णनमा देखाइन्छ, जसले हामीलाई यो अवसरमा खोजिरहेको कुरा हो कि होइन भनेर हामीलाई थाहा दिन्छ। त्यसोभए हामी पहिले नै साइटलाई जान्दछौं जुन यी विशिष्ट निर्देशांकहरू जुन हामीले अनुप्रयोगमा खोजिरहेका थियौं। तर यदि तपाईलाई शंका छ भने तपाई नक्शामा जहिले पनि जाँच गर्न सक्नुहुनेछ, यो हेर्नका लागि कि यसले तपाईलाई वास्तवमै कहाँ जान चाहानु भएको छ।
साइटको गुगल नक्शामा कसरी निर्देशांकहरू फेला पार्ने
विपरित अवस्था पनि अघिल्लोलाई हुन सक्छ। त्यो हो, हामी यो साइट जान्दछौं जुन हामी खोजिरहेका छौं (यसको नाम वा ठेगाना), तर हामी यस साइटको निर्देशांकहरू जान्दैनौं। तर हामी यस जानकारीमा पहुँच गर्न सक्षम हुन चाहन्छौं कि या त सरल जिज्ञासाको बाहिर वा किनभने हामीसँग जीपीएस छ जसमा हामी उनीहरूमा प्रवेश गर्न चाहन्छौं जुन केहि विशिष्ट मोडेलहरूको केस हो। गुगल नक्शाले पनि हामीलाई सजिलैसँग यो जानकारी प्राप्त गर्न अनुमति दिन्छ।
यस केसमा हामीले फोन वा ट्याब्लेटमा अनुप्रयोग खोल्नु पर्छ, यद्यपि यो कम्प्युटरमा पनि सम्भव छ। त्यसैले हामी गर्न छ थिच्नुहोस् र नक्सामा एक विशिष्ट क्षेत्र मा समात्नुहोस्, जहाँ कुनै लेबल छैन। हामी नक्सामा फोन स्क्रिनमा रातो पिन देखा पर्दासम्म यो गर्छौं। त्यसोभए हामी देख्न सक्छौं कि भनिएको बक्सको माथिल्लो भागमा, जहाँ हामीले क्लिक गरेका साइटको बारेमा जानकारी प्रदर्शित हुन्छ, यसको निर्देशांकहरू देखाइन्छ।
घटनामा जब तपाई गुगल नक्शाको वेब संस्करण प्रयोग गर्नुहुन्छ, तपाईले गर्नु पर्छ नक्शाको पोइन्टमा माउस क्लिक गर्नुहोस् जसको तपाईं यी निर्देशांकहरू जान्न चाहानुहुन्छ। यसैले यसमा खैरो पशपिन प्रदर्शित हुन्छ। स्क्रिनको तल, एउटा बाकस देखा पर्नेछ, त्यो साइटको बारेमा जानकारी, जस्तै नाम र शहर। हामी यसको निर्देशांकहरू पनि देख्न सक्दछौं, यदि हामी चाहन्छौं भने हामी प्रतिलिपि गर्न सक्नेछौं, अर्को केसमा प्रयोग गर्न वा यदि हामीले जीपीएसमा प्रविष्ट गर्नुपर्‍यो भने। यसैले यो जानकारी प्राप्त गर्न पनि सजिलो छ यदि तपाईं आफ्नो कम्प्युटरमा यो विकल्प प्रयोग गर्नुहुन्छ।
लेखको पूर्ण मार्ग: ग्याजेट समाचार » सामान्य » ट्यूटोरियलहरू » Google नक्सामा कसरी निर्देशांक राख्ने